News - Mabda'a shaqada ee waalka korontada
Baalalka korontada ku shaqeeya wuxuu leeyahay tallaabada wareejinta 90 digrii. Jirka diiqu waa meere wareegsan oo dalool ama kanaal maraya dhidibkiisa. Ballalka kubbadda waxaa badanaa loo isticmaalaa dhuunta sida waalka korantada korontada si loo jaro, loo qaybiyo loona beddelo jihada socodka dhexdhexaadka. Waxay ubaahantahay oo kaliya inay wareegto 90 digrii iyo istiraatiijiyad yar si ay si adag ugu xirto. Baalalka kubbadda ayaa ugu habboon in loo isticmaalo beddel ahaan iyo waalka xiridda. Horumarku wuxuu u qaabeeyey bawdada kubbadda inuu ceejiyo oo uu xakameeyo qulqulka, sida waalka kubbadda ee V-ga ah. Astaamaha ugu muhiimsan ee waalka korontada ku shaqeeya waa qaab dhismeedkiisa is haysta, shaabad lagu kalsoonaan karo, qaab fudud iyo dayactir ku habboon. Dusha sare ee shaabadaynta iyo dusha sare ee wareega ayaa inta badan ku jira xaalad xiran, taas oo aan sahlaneyn in dhexdhexaadintu baabi'iso. Way fududahay in la shaqeeyo lana ilaaliyo. Waxay ku habboon tahay biyaha, dareeraha, asiidhyada iyo gaaska dabiiciga ah. Dhexdhexaadiyaha shaqeeya sidoo kale wuxuu ku habboon yahay dhexdhexaadka xaaladaha adag ee shaqada, sida oksijiin, hydrogen peroxide, methane iyo ethylene, iwm, kuwaas oo si ballaaran loogu isticmaalo warshadaha kala duwan. Jirka waalka kubbadda ayaa noqon kara mid isku dhafan ama isku dhafan.
Baalalka korantada korontada waa isku-darka nooca furaha kubbadda iyo dhaq-dhaqaaqa korantada. Qaab dhismeedka jirka ee waalka kubbadda waa spool wareega 90 digrii. Dhaqdhaqaaqa korantada wuxuu galiyaa calaamadda caadiga ah ee 0-10 mA. Kooxda mootadu waxay wadaan gawaarida gawaarida iyo xagasha dixiriga xagasha. Ku hagaaji waalka sanduuqa furaha. Isticmaalkeeda waxaa badanaa soo saara qaddarka howlaha socda iyo hagaajinta.
Dhaqdhaqaaqayaasha korantada ee sida caadiga ah loo isticmaalo waxaa ka mid ah isku-rogayaal badan, hal-jeedin, caqli badan, afar-geesleyaal kiciyayaal, kiciyayaal koronto toosan ah, kiciyayaal caddeyn u ah qarxa, iyo firfircooniyeyaal yar yar. Baalalka kubbadda inta badan waxaa ka mid ah biibiileyaasha dul sabeynaya, qasnado go'an oo dheelitiran, Walxaha kubbadda leh ee O-qaabeeya, Faylal-kubbadeedka V-qaabeeya, iyo saddex-geesoodka kubbadaha. Isku-darka fulinta iyo isku xidhka waalka kubbadda ayaa si wada jir ah u soo saari kara badeecooyin kala duwan. Waxa kale oo aad ku dari kartaa sanduuqa xakamaynta ee hawlgalka fog, oo waxaad ku dari kartaa qalab kale jiheeyaha si aad u gaarto codsiyo badan oo shaqeynaya, sida inaad ku darto qalabka korontada si aad u hagaajiso socodka, iyo beddelka / beddelka booska boos ee hadda loo isticmaali karo in lagu xakameeyo qalabka. Tilmaamida iyo xakamaynta furitaanka booska, mishiinka wiishka gacanta ayaa lagu shaqeyn karaa gacanta marka uusan jirin wax hada jira, iyo qalabyada kale ee sida caadiga ah loo isticmaalo waxaa ka mid ah gacmo-gashiga dahaadhka ah, furayaasha safarka ee qaraxan aan caddeyn karin, iwm. Xulashada hore waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo xaaladaha shaqada .
Xisaabaadka korontada korontada ayaa hadda si ballaaran loogu isticmaalay saliida, gaaska dabiiciga ah, daawada, cuntada, quwadda korontada, tamarta nukliyeerka, korontada, bixinta biyaha iyo bulaacada, kululaynta, macdanta iyo warshadaha kale, waana aalado farsamo oo muhiim u ah dhismaha difaaca qaranka. Sidoo kale waa shey lagama maarmaan u ah dhismaha farsamada. Waxay kuxirantahay suuq badan, badanaa sababta oo ah sababo kala duwan sida shaqo xoog leh, cabir yar, waxqabad la isku halleyn karo, awood wareejin ballaaran, dad iftiin iyo raqiis ah, iyo kontoroolka fog ee qalabka korontada lagu xiro. Baalalka korontada ku shaqeeya korontadu ma aha oo kaliya ruxruxid, damis, goyn, iwm. Alaab wanaagsan oo loogu talagalay ka-leexashada iyo leexinta, ama badeecad kulul oo xulasho ah oo ku saabsan nidaamka nidaaminta socodka. Waxay leedahay astaamo badan sida caabbinta cadaadiska, iska caabinta heerkulka, iska caabinta daxalka, iska caabinta socodka hooseeya, nolosha adeega dheer, iyo kala duwanaanta dalabyada.
Waqtiga boostada: Juun-12-2021